RAJADA UCID WAA RAJADA SHACBIGA SOMALILAND ENG C/XAKIIM GUDOOMIYAHA UCID NORWAY | Toggaherer's Weblog
Eng Abdi Xakiim Ismacil Gudoomiyaha Ucid Ee wadanka Norway (Photo)
OSLO 26 Feb 2009 (THN)
Waxaanu waraysi kooban la yeelanay Guddoomiyaha UCID-Norway Eng.C/Xakiim Ismaaciil X.Axmed, waraysigaasi oo aanu dhinacyo doora wax ka weydiinay wuxuu u dhacay sidatan:
S:Guddoomiye wadanka Norway waxaa ku nool Jaalliyad aad u firfircoon oo ka tilmaaman badiba Jaaliyaddaha kale ee dhigooda ah, sidee ayaad ku gaadheen dadaalkan balaadhan?
J:Waa mahadsantahay C/Wahaab, runtii waa su’aal habboon oo mudan dadka in loo iftiimiyo siday iskuduubniddani ku timi, sidaad aragtay Jaalliyaddan dadkeedu waa dad isu caloolxaadhan oo aanay saamayn qaloocan kaga tegin isbadeladii ay wateen waayihii kala gedisnaa ee ina soo maray; mahadeedana waxaa leh raggii Jaalliyadda dhiddibada u taagay iyo kuwii ka danbeeyayba, kuwaas oo lagu yiqiinay aftahanimo iyo isu soo dhawaynta xubnaha Jaalliyadda; raggaas waxaan ka xusi karaa Oday C/Laahi Baaruud Cige, Oday Aabi Xujaale, Oday Cali Xaaji, Oday Axmed Cawad, Oday Ismaaciil Cali iyo Oday Cali Xuseen.
S:Ka Xisbi UCID ahaan sidee ayaad ugu diyaargaroowdeen doorashooyinka soo socda ee Madaxtooyada ? Rajose intee leeg ayaad ka qabtaan in aad ku guulaysataan?
J: Xisbiga UCID si aad ah ayuu ugu diyaargaroobay doorashada Madaxweynaha, hadda waxaa xubnaha Xisbiga iyo taageerayaashiisu ku jiraan ololihii ugu danbeeyay ee dhaqaale urrurinta doorashada, sidaad ogtahayna doorashadu waxay u baahan tahay dhaqaale aad ah, dadaal badana waa loogu jiraa sidii hawshaasi natiijo fiicani uga soo bixi lahayd; waxaan iyaduna halmaan lahayn sida madaxda Xisbiga UCID safarada ugu gaalaabixinayaan waddanka gudihiisa iyo dibeddiisaba, taasoo looga jeedo in indhaha shacbiga iyo caalamkaba Xisbigu qalbigooda ugu soo jeediyo doorashada inagu soo fool leh.
Rajada Xisibigu ka qabo doorashada inuu ku guulaysto waa mid aad u wayn, sababtoo ah Xisbiga doorashadii hore dadku ma fahansanayn wuxuu u taagan yahay, maantase wuxuu Xisbiga UCID aad ugu hanweyn yahay in shacbigu haatan casharro lama ilaawaana ka bartay doorashadii 2003dii, taasoo aan odhan karo shacbigu maanta way kala garanayaan Xisbiga ka saaraya marxaladdan murugsan ee dadkii ay dawladdii ay doorteen jahohabaabinayso.Rajada Xisbiga UCID waa rajada shacbiga Somaliland, haddii aanu Xisbigu ku guulaysana waxaa odhan karaa shacbigu ma guulaysan, taasoo dib ay giraantu sideedii uun ay u socon doonto: horumarla’aan iyo humaaggan hadda lagu jiro in lagu sii jiri doono.
S:Gudoomiye waayo aragnimo intee leeg ayuu xisbigiinu ka helay doorashooyinkii hore ayaad odhan kartaa?
J:Waayoaragnimada uu Xisbigu ka helay doorashooyinkii hore waxay tahay Xisbiga oo aan hore loo aqoon maantase la bartay qiimaha uu ugu fadhiyo Qaranka Somaliland. Waa Xisbi samotalis ah, horusocod ah, waa Xisbi u taagan ISBEDEL horumarineed oo la gaadhsiiyo Somaliland, waa Xisbi muruqiisa-maskaxeed uu aad u wayn yahay, waa Xisbi tusi doona barina doona sidii ay dadku uga faa’iidaysan lahaayeen nimcada Ilaahay ku manaysatay dalkeenna, isla markaana xoogga iyo waqtiga ku dayacmaaya cidlada looga dhigi lahaa dhaxal loo reebo jiilasha danbe. Xisbigu wuxuu u fududayn doonaa bulshadu si iyagoo isku kalsoon ay wax u qabsan lahaayeen.
S:Xisbiga UCID muxuu ugu talo galay dhalinyarada reer Somaliland wax horumar ah?
J:Waa su’aal fiican, Xisbiga UCID waa Xisbi ku xidhan dhallinyarada iyo haweenka maadaama ay yihiin cuddudii waddanka, Xisbigu wuu la socdaa baahiyaha iyo duruufaha ay qabaan dhallinyaradu hadday tahay dhinacyada waxbarashada, shaqola’aanta, bulshada iyo ciyaarahaba. Xisbigu wuxuu horumarin doonaa waxbarashada, taasoo macnaheedu yahay dhallinyarada, isla markaana wuxuu Xisbigu abuuri doonaa goobo shaqo oo ay dawladdu maalgeliso sidoo kalena wuxuu dhiirrin doonaa ganacsatadu inay balaadhiyaan garbahooda oo furaan goobo dad badani ka shaqayn karo; si looga hortago mukhaadaraadkana Xisbigu wuxuu awood badan saari doonaa in la horumariyo sportiga.
S:UCID iyo Xisbiyada kale ee labada ah iyamaad odhan kartaa ka Norway ahaan way ku taageerayaal badan yihiin?
J:Waa su’aal meesha leeg C/Wahaab;qaabka taageeradu wuu kala duwan yahay markaad eegto saddexda Xisbi; marka laga jawaabaayo yaa taageero badana waa in ay jirtaa meel food lagu qaaday oo lagu kala baxay, nasiib wanaag way dhacday arrintaasi 2003dii markii ay socotay doorashadii Madaxweynuhu waxaana halkan guushu ku raacday Xisbiga UCID. Doorasho danbe weli maanu qaban, se in la qaban doono ayay ila tahay si mashqaca loo sii yara geliyo bal si loo oggaado taageerada Xisbiyadu siday kala tahay.
S:Doorashadii dib bay u dhacaysaa ayay leeyihiin Komishankii, arrintaas sideed u aragtaa?
J:Waa arrin aad u culus, waana mid ay keenayso wax ay ka tahayba mooyee siday u muuqato aqoonyari,farsamoxumaan,kalsoonidarro iyo danaysi. Khaladkii ugu horreeyay ayaa ahaa heshiiskii lala galay shirkadaha shisheeye waana kaa maanta geel dheer inala koray, hawshani hawl ay qaban karaan muwaadiniintu ayay ahayd, kutalogalna looma samayn. Ka gudub wixii dhacay, waxaa maanta ina horyaal sidee xaal noqonayaa? Anigu waxaan odhan lahaa si kastaba haw dhacdee waa inaan doorashadu dib uga dhicin bil wax ka badan, haddiise aanay intaas ku qabsoomayn waa in Guddoomiyaha Guurtida xilka Qaranka loo tiriyaa, isna inta uu u oggolyahay dasdtuurku uu doorasho ku qabtaa.
S: Ugu danbayntii maxay tahay fariinta aad u gudbinaysaa taageerayaasha Xisbiga UCID iyo dhamaan shacab- weynaha reer Somaliland, gudoomiye?
J:Taageerayaasha Xisbiga UCID waxaan leeyahay guushu way dhowdahay ee dadaalka badiya.;
Dhammaan Shacbiga Somalilandna waxaan leeyahay waynu wada ognahay in waddanku isbedel horseeda horumar u baahan yahay, markan fursadii aynu ka faa’iidaysan lahayn -ee khaladaadka aynu codkeenna ku sixi lahayn- sow ma joogto? Si haddaba himiladaasi inoogu rumoowdo codkeenna, muruqeenna iyo maalkeennuba sow ma habboona inay UCID ku shubmaan? Xisbiga UCID waa Xisbi u adeegi doona bulshweynta, waa Xisbi aan u dhaqmi doonin sidii madaxdu dadka leedahay, waanu u dhagonugul dhawaaqooda, waa Xisbi aan geesbiciid ula soo bixi doonin shacbigiisa, waa Xisbi ilaalin doona karaamada iyo xuquuqda muwaadinka.
ToggaHerer Office Norway Oslo.
Waxa warisyaga Qaaday :-
Tafatiraha Togaherer C/wahaab M.Ibrahim